ZayYarHlaing: The battery's dead
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ သိပ္ပံပညာရှင်များက လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများထည့် သွင်းသိုလှောင်ကာ၊ ပြန်လည်
အားသွင်းနိုင်သည့် ပလတ်စတစ် အပြားတစ်မျိူးတီထွင်ထုတ်လုပ်ဖန်
တီးနိုင်ခဲ့ ပြီဟု ကြေငြာလိုက်
သည့် အတွက် မျိူးဆက်ပေါင်းများစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးစွဲခဲ့ ကြရသော သမားရိုးကျ ဓါတ်ခဲများ
အသုံးပြုစရာမလိုတော့ ပဲ အမှိုက်ပုံးထဲသို့ ရောက်ရှိတော့ မည်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိသုံးစွဲနေသော လက်
ကိုင်မိုဘိုင်းလ်ဖုံးများ၊ ကားများနှင့် နောက်ဆုံး ၀တ်ဆင်နေသောအ၀တ်အစား ဒီဇိုင်းများပါ နောင်
မကြာမီကာလများတွင် သိသိသာသာကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတော့ မည်ဖြစ်သည်...
ဦးဆောင်တီထွင်သူ နာတာရှာ နှင့် သူမ၏အဖွဲ့ သားများရဲ့ တီထွင်မှုအစွမ်း...
Researcher Natasha Shirshova with her team's invention
ယခုကဲ့ သို့ လွန်စွာပါးလွှာသည့် ပလတ်စတစ် လျှပ်စစ်ဓါတ်ပြားများတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် 
မိုဘိုင်းလ်ဖုံးများ၊ အိုင်ပေါ့ ဒ်များရဲ့ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသက်တမ်းများ နှစ်ဆ တိုးလာမှာ
ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားအနေဖြင့် လည်း ခရက်ဒစ်ကတ်၊ ဘဏ်ကဒ် လောက်မျှသာ ပါးလွှာတော့ မှာ
အခုလို နည်းပညာအသစ်ကြောင့် နောင်ဆို ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်များပါ စက္ကူစ တစ်စလို ခွေ
လိပ်သိမ်းဆည်းပြီး သယ်ဆောင်သွားနိုင်လိမ့့်မှာဖြစ်ပါတယ်...
ပြီးတော့ လူတွေသွားလာလှုပ်ရှားနေယင် အလိုအလျောက်ဓါတ်အားသွင်းပေးနေပြီး၊ ရာသီဥတုအေး
မြလာတဲ့ အခါ အပူငွေ့ တွေထုတ်လွှတ်ပေးမယ့် လျှပ်စစ်အင်္ကျီအ၀တ်အစားများလည်း တီထွင်ဖန်
ဒါကတော့ အဆိုပါ ပလတ်စတစ်ဓါတ်အားသိုလှောင်ပြား အလုပ်လုပ်ပုံရှင်းပြချက်ပါ...
အလိုအလျှောက်နွေးထွေးစေမယ့် နွေးထည်အင်္ကျီပါးပါးလေးတွေနဲ့ 
တွေပါ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့် မယ်...
လန်ဒန်မြို့ Imperial ကောလိပ်၊ လေကြောင်းဆိုင်ဌာန မှ Dr Emile Greenhalgh က ယခုတီထွင်
လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းဟာ ဓါတ်ခဲမဟုတ်ကြောင်း စွမ်းအားမြင့် လျှပ်စစ်သိုလှောင်ပြား ဖြစ်ပြီး သမားရိုးကျ
လျှပ်စစ်စီးပါတ်လမ်း လုပ်ဆောင်ပုံအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
သူ့ အဖွဲ့ ၏ စမ်းသပ်ပုံစံတူပလတ်စတစ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပြားဟာ ၅ လက်မ ပတ်လည်အရွယ်ရှိ
ပြီး ဝေဖာပြားကဲ့သို့ ပါးလွှာကာ သာမာန်လျှပ်စစ်အားသွင်းမှု ငါးစက္ကန့် မျှအချိန်ဖြင့် မီးချောင်းတစ်
ချောင်းကို မိနစ် ၂၀ ကြာမျှ လင်းစေနိုင်ပါတယ်...
ဗေါ်လ်ဗို ကားကုမ္ပဏီနှင့် ပေါင်စတာလင် ၃ သန်း ( ဒေါ်လာ ၄ သန်း ခွဲ ) ကုန်ကျမည့် အနာဂတ်
မျိူးဆက်သစ် လောင်စာဆီနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပူးတွဲသုံးကားများအတွက် သုတေသနပြုစီမံကိန်း
ပြုလုပ်နေသည့် Dr Greenhalgh က ” ယခုတီထွင်နိုင်ခဲ့ တဲ့ အကျိူးဆက်ကြောင့် နောင်အနာဂတ်
မှာ ထုတ်လုပ်မယ့် ကားများမှာသုံးစွဲမယ့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ၎င်းကားများရဲ့ ခေါင်မိုး၊ သို့ မဟုတ်
ဘေးတံခါးများကပင် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...” ဟု ပြောကြားခဲ့ ပါသည်...
” ဒီလျှပ်ပြားရဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှုဟာဒီတင်ရပ်မသွားသေးပါဘူး....ထူထဲကြီးမားတဲ့ ဓါတ်ခဲပြားများအသုံး
ပြုစရာမလိုတော့ တဲ့ အတွက် နောင်မိုဘိုင်းလ်ဖုံးများဟာ ဘဏ်ကဒ်တစ်ခုလိုပါးလွှာတော့ မှာဖြစ်ပြီး
ကိုယ်ပိုင်သုံးကွန်ပြူတာအသေးများမှာလည်း အလိုအလျောက်ဓါတ်အားသွင်းနိုင်မှာမို့နာရီပေါင်းများ
စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...” လို့ သူကဆက်ပြောပါတယ်...
အဆိုပါ ပလတ်စတစ်ဓါတ်ပြားဟာ သာမာန်ဓါတ်ခဲများထက်လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ အားသွင်းနိုင်၊ အသုံး
ပြုနိုင်သည့် အတွက် သုံးစွဲမှုသက်တမ်းလည်းပိုမိုကြာရှည်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်...
သိပ္ပံပညာရှင်များက အဆိုပါလျှပ်စစ်ဓါတ်အားသိုလှောင်ပြားကို ဗော်လ်ဗိုကားရဲ့ အပိုဘီးတင်ဆောင်
တဲ့ သတ္တုပြားနေရာအကန့် မှာအစားထိုးအသုံးပြုဖို့ ကြံရွယ်ထားပါတယ်...
ဒါကြောင့် လက်ရှိဗော်လ်ဗိုကားမှာသုံးစွဲနေတဲ့ မျိူးဆက်သစ်လျှပ်စစ်ဘက်ထရီအိုးနေရာမှာအခု
တီထွင်လိုက်တဲ့ ပလတ်စတစ်ဓါတ်အားပြားများအသုံးပြုတော့ မှာမို့ အရွယ်အစားပိုမိုသေးငယ်
သွားမှာဖြစ်ပြီး ကားအလေးချိန်လည်းလျော့ ကျကာ ကားရဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှုစွမ်းရည် ပိုမိုတိုးတက်
” ဒီလိုတီထွင်မှုမျိူးတစ်ခြားမည်သူမျှ မပြုလုပ်နိုင်သေးပါဘူး...နောင် ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ လက်ရှိ
အသုံးပြုနေတဲ့ ဘက်ထရီတွေအားလုံး ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်...” လို့Dr Greenhalgh က
နေရစ်ခဲ့ တော့ ခေတ်ဟောင်း ဓါတ်ခဲများ...
The new patented material from scientists at Imperial College could do away with the need for traditional batteries forever
တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာများကတော့ အံ့ မခန်းပါပဲဗျာ...
0 comments: to “ The battery's dead ”